Nhau - SILIKE inotangisa chizvarwa chitsva chesilicone wakisi, iyo inogona kugadzirisa chivakwa chinodzivirira chivakwa chePP zvigadzirwa zvemidziyo yemukicheni
SILIKE inotangisa chizvarwa chitsva chesilicone wakisi, iyo inogona kugadzirisa chivara chinodzivirira chivakwa chePP zvigadzirwa zvemidziyo yemukicheni
Sekureva kwedata kubva kuiMedia.com, musika wepasi rose wekutengesa kwemidziyo mikuru yemumba muna 2006 yaive mamirioni makumi matatu nemakumi matatu nemanomwe, uye yakasvika mamirioni mazana mashanu nemakumi manomwe kubva muna 2019; zvinoenderana nedatha kubva kuChina Household Electrical Appliances Association, kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu 2019, musika wekutengesa wezvigadzirwa zvemukicheni muChina Vhoriyamu iyi yakasvika mamirioni 21.234 emamiriyoni, kuwedzera kwegore-gore-gore kwe9.07%, uye kutengesa kwekutengesa kwasvika $ 20.9 bhiriyoni. .
Nekuvandudzika zvishoma nezvishoma kwehupenyu hwevanhu, kudiwa kwemidziyo yemukicheni kuri kuwedzera zvishoma nezvishoma. Panguva imwecheteyo, rucheno uye runako rweimba yemidziyo yemukicheni rave kudikanwa kusingatarisirwe. Seimwe yezvinhu zvikuru zviri mudzimba dzemidziyo yemumba, mapurasitiki ane mwero wekushomeka kwemvura, asi kushomeka kwemafuta, kusvibiswa nemavara, uye kukweshana kwekukwasva kwakashata. Ichishandiswa sehombodo yemidziyo yekicheni, zviri nyore kuomerera kumafuta, utsi uye mamwe makwapa panguva yekushandiswa kwezuva nezuva, uye iro ganda repurasitiki rinokwizwa zviri nyore panguva yekukwesha, ichisiya mienzaniso yakawanda uye ichikanganisa kutaridzika kwechishandiso.
Zvichienderana nedambudziko iri, pamwe chete nezvinodiwa pamusika, SILIKE yakagadzira chizvarwa chitsva chesilicone wakisi chigadzirwa SILIMER 5235, iyo inoshandiswa kugadzirisa dambudziko rakajairika remidziyo yekicheni.SILIMER 5235 iboka rinoshanda-rine-refu-cheni alkyl-yakagadziriswa silicone Wakisi. Inobatanidza zvinobudirira hunhu hweanoshanda boka-ane akareba-cheni alkyl nesilicone. Iyo inoshandisa iyo yepamusoro yekuvandudza kugona kwesilicone wakisi kune yepurasitiki pamusoro kuti igadzire silicone wakisi. Inobudirira silicone wakisi firimu yakaturikidzana, uye iyo silicone wakisi dhizaini ine yakareba-cheni alkyl boka rine mashandiro emapoka, kuitira kuti iyo silicone wakisi inogona kusungirirwa pamusoro uye iine yakanaka yakareba-yakareba mhedzisiro, uye inowana kuderedzwa kuri nani kwesimba simba , hydrophobic uye oleophobic, kukwenya kukwenya uye zvimwe zvinokanganisa.
Hydrophobic uye oleophobic performance test
Iyo yekudyidzana angled bvunzo inogona kuratidza mushe kugona kwepamusoro kwechinhu kuve phobic kune mvura zvinhu uye kuve chakakosha chiratidzo chekuona hydrophobic uye oleophobic: iyo yakakwira iyo yekubata kona yemvura kana mafuta, zvirinani iyo hydrophobic kana oiri kuita. Iyo hydrophobic, oleophobic uye isina kusimba zvinhu zvechinhu zvinogona kutongwa nekona yekubatana. Inogona kuonwa kubva kune yekubata angled bvunzo iyo SILIMER 5235 ine yakanaka hydrophobic uye oleophobic zvivakwa, uye iyo yakawanda iyo huwandu yakawedzerwa, iri nani hydrophobic uye oleophobic zvivakwa zvechinhu.
Unotevera mufananidzo wechiratidziro weiyo yekubata angled bvunzo yekuenzanisa kwemvura yakasarudzika:
Iyo yekudyidzana angle test data iri seinotevera:
Oiri yekubata kona / °
Deionized mvura yekubata kona / °
Stain kuramba bvunzo
Anti-kusvibisa zvinhu hazvireve kuti hakuzovi nematavi anonamatira kumusoro kwechinhu pane kudzikamisa kunamatira kwemavara, uye iwo mavara anogona kupukutwa nyore nyore kana kucheneswa nemashandiro akareruka, kuitira kuti icho chinhu chine zvirinani stain kuramba kushanda . Tevere, isu tichajekesa kuburikidza nemiedzo yakati wandei yekuyedza.
Murabhoritari, tinoshandisa mamaki-akavakirwa kunyora pazvinhu zvakachena kutevedzera mavara ekutsvaira bvunzo, uye kucherechedza zvakasara mushure mekupukuta. Iyi inotevera vhidhiyo yekuyedza.
Midziyo yemukicheni inosangana netembiricha yakakwira uye mwando wakanyanya panguva yekushandisa chaiko. Naizvozvo, isu takaedza iwo masampuli kuburikidza neye 60-inovira kuyedza uye takaona kuti iyo anti-kusvibisa mashandiro epamaki peni yakanyorwa pane yemuenzaniso bhodhi haigone kudzikiswa mushure mekuvira. Kuti uvandudze mhedzisiro, unotevera mufananidzo wekuyedza.
Ongorora: Pane maviri "田" akanyorwa pane yega sampuro bhodhi mumufananidzo. Bhokisi dzvuku ibasa rakapukutwa, uye bhokisi rakasvibirira chiitiko chisina kuvhurwa. Zvinogona kuonwa kuti mucherechedzo peni unonyora matanho apo iyo 5235 yekuwedzera huwandu inosvika 8% Yakapukutwa zvakachena.
Uye zvakare, mukicheni, tinowanzosangana nemacondiments akawanda achisangana nemidziyo yemukicheni, uye kunamatira kwema condiment kunogona zvakare kuratidza kupesana-kusvibisa kuita kwechinhu. Murabhoritari, tinoshandisa muto wakareruka wesoya kuongorora kufambisa kwayo pamusoro peiyo PP sampuro.
Kubva pane zviedzwa zvataurwa pamusoro, tinogona kuita mhedziso yeSILIMER 5235 ine nani hydrophobic, oleophobic uye kusvibisa inodzivirira zvivakwa, inopa izvo zvinhu zviri pamusoro nekushandisa zvirinani, uye zvinobudirira zvinowedzera hupenyu hwebasa remidziyo yemukicheni.
Post nguva: Jul-05-2021